Maitiro Ekumisikidza Email Kuwanika Kune Anobatsira Technologies Martech Zone
Maitiro Ekumisikidza Email Kuwanika Kune Anobatsira Technologies
Chipiri, January 29, 2019 Svondo, Kukadzi 3, 2019 Douglas Karr
Kune kumanikidza kunogara kuripo kwevatengesi kuti vatore uye vagadzirise matekinoroji azvino uno uye vazhinji vanonetseka kuenderera. Meseji yandinonzwa ndadzokororazve kubva kukambani yega yega yandinobvunza ndeyekuti vari kumashure. Ndinovavimbisa kuti, nepo vangangove, ndizvo zvinoita vamwe vese. Tekinoroji iri kufambira mberi pamhepo isingaregi izvo zvisingatomboenderana nazvo.
Izvo zvakati, hwakawanda hwetekinoroji matekinoroji akavakirwa pane hwaro hwaisanganisira kune vese vanhu, kusanganisira avo vakaremara. Anobatsira matekinoroji anoramba achichinja nekukurumidza sezvinoita maturusi nematekinoroji. Mimwe mienzaniso yekukanganisa uye iyo matekinoroji anotendera vanhu vainavo kuchinjisa:
Kuchenjerera - masisitimu anodzidzisa uye anobatsira ndangariro.
chimbichimbi - biometric monitors uye emergency yambiro.
Kunzwa - anobatsira ekuteerera zvishandiso, zvinowedzera simba, uye zvinobatsira pamwe neizwi-kune-zvinyorwa zvinyorwa.
Mobility - prosthesis, vanofamba, mawiricheya, uye michina yekuchinjisa.
zvekuona nemeso - Vaverengi veScreen, embossers, braille kuratidza, magnifiers, tactile keyboards, navigation navigation uye vanopfeka matekinoroji.
Kuita kuti masystem emakomputa awanikwe, kune Hardware uye software masystem ayo anogonesa kushandiswa kwemacomputer nevanhu vakaremara uye vakaremara. Kune vanhu vane hurema hwepanyama, kutarisa-maziso uye makuru ekushandisa michina inogona kubatsira. Nezve kutadza kuona, vaverengi vechidzitiro, mameseji-kune-kutaura, akanyanya-musiyano ekuona zvigadzirwa, kana anovandudzwa emabraille kuratidzwa zviripo. Zvekuremara kwekunzwa, zvinyorwa zvakavharwa zvinogona kushandiswa.
Email ikozvino ndiyo yekutanga kutaurirana svikiro, kunyanya kune vanhu vakaremara. Vashambadziri vanogona uye vanofanirwa kugadzira, dhizaini uye vagadzirise mishandirapamwe yeemail inowanikwa. Iyi infographic kubva kuemail Monks ichakubatsira iwe kusimudzira maemail ako ekuona, kunzwa, kuziva, uye kusagadzikana kwetsinga.
Email vashambadziri pasi rose vagara vachitsvaga nzira nyowani dzekuvandudza kubatanidzwa uye kushanda kwemakambani avo emaimeri. Mukuita kudaro, vamwe vakagamuchira tekinoroji kuti vagadzire maemail avo kune avo vanhu bhiriyoni rimwe munyika unogara neimwe nzira yehurema (mabviro: World Health Organisation).
Email Mamongi: Maitiro Ekuita Emails Kuwanika
Iyi infographic inotsanangudza zvese kubva pane zvemukati zvisikwa, dhizaini, kune chimiro. Zvakare, iyo infographic ruzivo mamwe maturusi aunogona kushandisa:
WAVE - Webhu yekuwanika yekuongorora chishandiso. Aya mabhurawuza ekuwedzera anogona kukubatsira kuti uongorore uye gadzirisa nyaya neHTML yako.
A Checker - Ichi chishandiso chinotarisa mapeji eHTML chete kuti aenderane nematanho ekuwanika kuona kuti zvirimo zvinogona kuwanikwa nemunhu wese. Unogona kunama email yako HTML yakanangana nayo.
VoiceOver - VoiceOver yakasarudzika nekuti haisi yakamira yega screen screen. Yakanyatso kubatanidzwa muIOS, macOS uye ese akavakirwa-mukati maapp paMac.
Narrator - Narrator chirongwa chekuverenga-skrini chakavakirwa mukati Windows 10.
TalkBack - TalkBack ndiyo Google screen muverengi inosanganisirwa pamidziyo yeApple.
Heano akazara infographic, Email Kuwanika: Maitiro Ekugadzira iyo Yakakwana Inowanikwa Email:
Tags: teknolojia yekubatsiraembossers ebraillekukanganisa kwekuzivakuwanikwa kweemailemail mabhataniemail kopiemail mafontiemail mifananidzoemail mamiriromurondedzerakutadza kuonateknolojia inosakara
9 Maturu Ekushambadzira Ekukubatsira Iwe nekukurumidza Gadzira Zvirinani Blog Zvemukati